दशौ राष्ट्रिय हेमजा आलु महोत्सवको तयारी पुरा • Pokhara News by Ganthan
हेमजा, २१ चैत/दशौ राष्ट्रिय हेमजा आलु महोत्सव–२०७५ को तयारी पुरा भएको छ । सुन्दर ठाँउ हेमजा जाउँ आलुका स्वादिष्ट परिकार खाउँ, आलु एक परिकार अनेक भन्ने नाराका साथ सञ्चालन हुन लागेको महोत्सव चैत २२ देखि बैशाख १ गते सम्म विष्णुपादुका खेल मैदानमा हुदै छ । महोत्सव सफल बनाउन गठित विभिन्न उपसमितिले तयारी पुरा गरेको मुल आयोजक समितिका संयोजक कृष्णबहादुर खड्काले जानकारी दिए।
महोत्सवको उद्घाटन पुर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट्र पार्टी(नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।महोत्सवको उद्घाटन अगढि पोखरा महानगरपिलका वडा न. २५ हेमजाको मिलनचोकबाट बिहान १० बजे झाँकी सुरू हुने हुदा हेमजामा रहेका बिभिन्न सघंसस्था एंव आमा समुहहरूलाई झाँकीमा सहभागि भइ झाँकीलाइ थप आकर्षक बनाउन आयोजकले आग्रह गरेको छ ।
महोत्सवको पहिलो दिन प्रजापति पराजुली, चोलेन्द्र पैडेल, जिवन दहाल, परशुराम अधिकारी, केशव देवकोटा, काजल गुरुङ्ग र तुलसा जि.सीको प्रस्तुति रहने सांस्कृतिक उपसमिति संयोजक सुर्यबहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।
महोत्सवमा राष्ट्रिय कृषि दोहोरी गित प्रतियोगिता, रत्यौली गीत प्रतियोगिता, कृषि झाँकी प्रतियोगिता तथा पप कन्सर्ट राखिएको आयोजकले जनाएको छ । समग्र यस क्षेत्रको कृषि, पर्यटन, व्यवसाय, संस्कृति, साहित्य, खेलकुद लगाएतको प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले महोत्सवको आयोजना गरिएको हो।
महोत्सव प्रवेशका लागि रु. ८० को साधारण, ५० को विद्यार्थी सहुलियत तथा तिन सयमा महोत्सव अवधिभर स्थानिय पासको व्यवस्था मिलाइएको छ । महोत्सव ८० हजार देखि १ लाख दर्शकले अवलोकन गर्ने अनुमान गरिएको प्रचार संयोजक श्रीभद्र पौडेलले जानकारी दिए ।
एउटा विरामीलाई लगाउनु पर्ने सुई अर्कोलाई लगाएपछि विरामीको मृत्यु !